China Cantilever leposi ukwenziwa kunye Factory | Huade
Ii-racks zeCantilever kulula ukuzifaka kwaye ziyaguquguquka ukugcina imithwalo emide, enobuninzi kunye nobukhulu obungaphezulu njengemithi, imibhobho, itrasi, iiplywood kunye nokunye. I-Cantilever rack inekholamu, isiseko, ingalo kunye nokuqinisa.
Ii-racks zeCantilever kulula ukuzifaka kwaye ziyaguquguquka ukugcina imithwalo emide, enobuninzi kunye nobukhulu obungaphezulu njengemithi, imibhobho, itrasi, iiplywood kunye nokunye. I-Cantilever rack inekholamu, isiseko, ingalo kunye nokuqinisa. Ukufumaneka kwecala elinye okanye amacala aphindwe kabini.I -antilever rack inokuba ziindidi ezintathu: uhlobo lomsebenzi olula, uhlobo lomsebenzi ophakathi kunye nohlobo lomsebenzi onzima.
Kulula ukuyisebenzisaumphambili uvulekile ngaphandle kweekholamu, uvumela ukulayishwa okukhawulezayo kunye nokothula umthwalo. Izinto zigcinwa kwaye zilungiswe ezingalweni ngeefolokhwe ezisecaleni okanye istack cranes, ezinokuthi zinciphise ezabasebenzi ezinxulumene neendleko zokuhambisa.
EzoqoqoshoOlu hlobo lokurhabaxa lubiza ixabiso eliphantsi kwaye lilahlekile kakhulu.Izinto ezincinci kunepallet yesitokhwe esstorgae kunye neziphelo ezivulekileyo kuthetha ukuba ubude bomthwalo wokugcina bonyukile ngaphandle kokunyuka kweendleko zokugcina. Oko kukhetho lwezoqoqosho.
Flexible, Akukho kholamu zongezelelweyo, ukulayishwa kunokubekwa kubude bonke betheyibhile yethalavel.
Uyakhetha, iindawo ezivulekileyo zichongwa kwangoko.
Ukuziqhelanisa, i-cantilever rack inokugcina naluphi na uhlobo lomthwalo. Oku konga ixesha kunye neendleko zabasebenzi.
IiCacks zeCantilever zineenxalenye ezine
Isiseko, ixhasa abathe tye neengalo apho umthwalo uphumle khona. Isiseko sivalwe ngokukhuselekileyo kumgangatho okanye kumgangatho womhlaba.
Ethe tye, Qhagamshela kwisiseko ukuxhasa iingalo; iingalo zinokuhlengahlengiswa ngokuthe tye.
Ingalo, Yolula ukusuka kwabathe tye ababambe umthwalo ogciniweyo, banokuma ngokuthe ngqo okanye ngaphezulu kwii-engile ezahlukeneyo ngokweemfuno zeemveliso ezigcinwayo.
Horizontal / X bracing, Qhagamshela uprights, ukubonelela ngozinzo, ukuqina kunye namandla.
I-rackile ye-Cantilever inokudityaniswa kwindawo yokugcina izinto ezahlukeneyo, ikakhulu ngokuchasene nodonga lwecala elinye kunye nokubuyela umva ngamacala aphindwe kabini. Isithuba esiphakathi kokuphakama sinokulungiswa ukuze silingane nakweyiphi na ikona kwindawo yokugcina izinto ukuze wenze olona lukhulu lwendawo ekhoyo.
I-Huade Cantilever Rack, ukhetho lwakho olufanelekileyo.
Egqithileyo Inkqubo yokubeka ipallet
Okulandelayo: Ibhokisi Flack leposi
I-Pallet Flow Rack